ဖူဂျီရှိဘဆာကူရာပွဲတော် ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ရှိဘဆာကူရာက ပုံသဏ္ဍာန်က ဆာကူရာနဲ့ တူနေတာက ထူးခြားချက်ဖြစ်ပြီး မြက်ခင်းပြင်လိုမျိုး မြေမျက်နှာပြင်ကို ဖုံးအုပ်ထားရင်း ပြုစုပျိုးထောင်ပါတယ်။ ဖူဂျီတောင်ရှေ့ မှာ ရှိဘဆာကူရာရဲ့ ရှုခင်ကျယ်ကြီးက အံ့မခန်းပါဘဲ။ ပွဲတော်က ဧပြီလလယ်မှ မေလကုန်ထိ ကျင်းပပါတယ်။
လူကြီး ( အလယ်တန်းကျောင်းသားနှင့်အထက် ) ၅၂၀ ယန်း
ကလေး ( ၃ နှစ်အထက် ) ၂၁၀ ယန်း
အချိန် ၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀
ဧပြီလလယ်မှ မေလကုန်ထိ ကျင်းပပြီး စုဝေးရာနေရာမှာ အမျိုးမျိုးသောပွဲတွေ ခင်းကျင်းပြသနေပါတယ်။ ဘိရဆာကူရာပွင့်ချိန်က သီးသန့် ရထားတွေ ပြေးဆွဲပေးလို့သေချာစုံစမ်းဖို့ လိုပါတယ်။
JR ( Ōtsuki ) မှ ဖူဂျီခရူးခိုးတိုခုခရူး ဖူဂျီစံတိုခုခရူး မှာ စီးပြီး (Kawaguchiko ) ဆင်း
ဲJR ( Chibaဘူတာ ) မှ JR စိုဘုလိုင်း . ချူးအိုးလိုင်း တိုက်ရိုက် ယာမာနာရှီဖူဂျီဂေါမှာ စီးပြီး ( ခါဝခုချိကို ) ဆင်း
( Tokyoဘူတာ ) မှ တိုးမဲအိခိုးစိုခုဘတ်စ်ကား တိုကျို . အိချိဂအိုလိုင်း မှာ စီးပြီး ( ခါဝခုချိကိုဘူတာ ) ဆင်း ( ၁၇၀ မိနစ် )
(Narita ) မှ ခိုးစိုခုဘတ်စ်ကား နာရီတာခူးကိုးလိုင်းမှာ စီးပြီး ( ခါဝခုချိကိုဘူတာ ) ဆင်း ( ၁၅၀မိနစ် )
(shinjukuခုဘူတာ )မှ ချူးအိုးခိုးစိုခုဘတ်စ်ကား ဖူဂျီဂေါကိုလိုင်း မှာ စီးပြီး ( ခါဝခုချိကိုဘူတာ ) ဆင်း
( Kawaguchikoဘူတာ ) မှ ဘိရဆာကူရာလိုင်နာ မှ စီးပြီး ( ၃၀ မိနစ် ) ခိုင်းဂျောချော့ခဲစွတ်